क्यामेरा दृश्यफिन्डरका प्रकारहरू: अप्टिकल र इलेक्ट्रोनिक
डिजिटल क्यामेरा कुञ्जी अवधारणाहरू
by जो प्लम्रिज
तपाईंको आवश्यकताहरू भेट्न क्यामेरा दृश्यफिल्डर पत्ता लगाउनुहोस्
एक क्यामेराको दृश्यदर्शकले तपाईंलाई कुन चीज हेर्न सक्ने छ भनेर हेर्नलाई अनुमति दिन्छ। त्यहाँ विभिन्न डिजिटल क्यामेराहरूमा उपलब्ध विभिन्न प्रकारका दृश्यफिन्डरहरू छन्। जब नयाँ क्यामेरा खरिद गर्दा, कुन प्रकारका हेराइफेन्डर तपाई चाहनुहुन्छ चाहानुहुन्छ यो महत्त्वपूर्ण छ।
दृश्यदर्शक के हो?
दृश्यफिन्डर डिजिटल क्यामेराको पछाडिको शीर्षमा स्थित छ, र तपाइँ यसको माध्यमबाट दृश्य रचना गर्न यो हेर्नुहोस्।
ध्यान राख्नुहोस् कि सबै डिजिटल क्यामेराहरू एक दृश्यदर्शक छैन। केही बिन्दु र गोली, कम्प्याक्ट क्यामेराहरू दृश्यदर्शक समावेश गर्दैनन, यसको मतलब तपाईंले फोटो फ्रेम गर्न एलसीडी स्क्रिन प्रयोग गर्नुपर्दछ।
दृश्यदर्शक समावेश गर्ने क्यामेराहरूसँग, तपाईं प्रायः तपाईंको फोटो फ्रेम गर्न दर्शकदर्शी वा एलसीडी प्रयोग गर्ने विकल्प छ। केहि DSLR क्यामेराहरूमा यो विकल्प छैन।
एलसीडी स्क्रिनको सट्टा दृश्यफिन्डर प्रयोग गर्दै केहि फाईनहरू छन्:
दृश्यफिन्डर ब्याट्रीबाट कम शक्ति नाघ्छ।
दृश्यफिन्डरले राम्रो स्थायित्वको लागि अनुमति दिन्छ किनभने तपाई क्यामेरा आफ्नो शरीर नजिक हुनुहुन्छ।
दृश्यदर्शकले तपाईंलाई वास्तविक फोटो फोटोग्राफरको रूपमा महसुस गर्छ!
एक पटक तपाईं आफ्नो क्यामेराको हेराईफाइन्डर प्रयोग गर्न प्रयोग गर्नुहुँदा तपाईले पछाडि बिना क्यामेरा नियन्त्रणहरूलाई प्रायः बदल्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ तीनवटा प्रकार क्यामेरा दृश्यफिन्डरहरू छन्।
अप्टिकल दृश्यदर्शी (डिजिटल कम्प्याक्ट क्यामेरामा)
यो एक अपेक्षाकृत सरल प्रणाली हो जहाँ अप्टिकल दृश्यदर्शक एकै समयमा मुख्य लेन्सको रूपमा जूम गर्दछ। यसको ओप्टिकल पथ लेन्समा समानांतर चलाउँछ तापनि यसले तपाईंलाई छवि फ्रेममा के छ भनेर देखाउँछ।
क्याम्पफिन्डर कम्पाक्ट, बिन्दु र क्यामेरामा गोली लगाउँदा निकै सानो हुन्छ, र तिनीहरू प्रायः केवल90% प्रदर्शन गर्छन् जुन सेन्सरले वास्तवमा क्याप्चर गर्नेछ। यो "parallax त्रुटि" को रूपमा चिनिन्छ, र यो सबै भन्दा स्पष्ट छ जब विषयहरू क्यामेराको नजिक छन्।
धेरै परिस्थितिहरूमा, एलसीडी पर्दा प्रयोग गर्न यो अधिक सटीक छ।
ओप्टिकल दृश्यदर्शक (DSLR क्यामेरामा)
DSLRs मिरर र प्रिज्म प्रयोग गर्दछ र यसको अर्थ छ कि कुनै पर्लाक्स त्रुटि छैन। ओप्टिकल दृश्यदर्शक (OVF) सेन्सरमा प्रसोधन गरिने देखाउँछ। यसलाई "लेन्स" टेक्नोलोजी वा TTL मार्फत भनिन्छ।
दृश्यफिन्डरले तलको साथ स्थिति पट्टी प्रदर्शन गर्दछ, जुन एक्सपोजर र क्यामेरा सेटिङ जानकारी देखाउँछ। अधिक DSLR क्यामेराहरूमा तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न स्वत: फोकस पोइन्टहरूबाट चयन गर्न सक्नुहुनेछ, जुन चयन गरिएको एक हाइलाइट गरिएको सानो स्क्वायर बक्सहरूको रूपमा देखा पर्दछ।
ई.एफ.एफ. लाई प्रायः इलेक्ट्रोनिक हेराइफाइन्डर पनि टीटीएल टेक्नोलोजी हो।
यो कम्पैक्ट क्यामेरामा एलसीडी स्क्रीनको समान समान काम गर्दछ, र यसले छविलाई सेन्सरमा लेन्सद्वारा प्रोजेक्टलाई देखाउँछ। यो वास्तविक समयमा देखाइएको छ तापनि केही ढिलाइ हुन सक्छ।
प्राविधिक रूपमा, EVF एक सानो एलसीडी हो, तर यसले DSLRs मा फेला पर्यो viewfinders को प्रभाव लाई दोहोर्याउँछ। एक EVF parallax त्रुटिहरूबाट पनि पीडित छैन।
केहि EVF दृश्यफिन्डरले तपाईंलाई क्यामेरा लिन जाँदैछ विभिन्न कार्यहरू वा सुधारहरूमा अन्तरदृष्टि दिन्छ। तपाईंले हाइलाइट गरिएका क्षेत्रहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जुन बिन्दु निर्धारण गर्नुहुने क्यामेराले फोकस गर्नेछ वा यसले गति धब्बालाई अनुकरण गर्न सक्छ। EVF ले उज्यालो दृश्यहरूमा स्वचालित रूपमा उज्ज्वल बढाउन सक्छ र स्क्रीनमा देखाउन सक्छ।
डिजिटल क्यामेरा शब्दावली: फट मोड
डिजिटल क्यामेरा शब्दावली: आईएसओ
डिजिटल क्यामेरा शब्दावली: बिट्स के हो?
इन्टरपोलेशन के हो?
एएफ-लक के हो? (FE FE, AF, एई लक)
गामा के छ र फोटोग्राफीमा यो कसरी प्रयोग गरिन्छ?
डिजिटल क्यामेरा शब्दावली: के दृश्य मोड के हो?
लिनक्स फाइलहरू र फोल्डरहरू प्रतिलिपि गर्न कसरी प्रयोग गर्ने
Dell Inspiron 531 बजेट डेस्कटप पीसी
BZ2 फाइल के हो?
8 तपाईंको Renders मा फोटो-यथार्थवाद वृद्धि गर्नका लागि सुझाव
Tunebite समीक्षा: डीआरएम प्रतिलिपि संरक्षण हटाउने प्रोग्राम
Epson's FastFoto FF-640 फोटो स्क्यानर - र थप
3 जीएस4जी - कुन राम्रो छ?
8 उत्तम मोबाइल किनमेल अनुप्रयोगहरू
लिनक्समा VNC रिमोट डेस्कटप प्रकार्य कसरी प्रयोग गर्ने
एसटीपी फाइल के हो?
Hosts.allow - लिनक्स कमान - यूनिक्स कमान्ड
प्रिन्टर किन्नु अघि
पोर्टेबल उपकरणहरू के हुन्?
VLC मिडिया प्लेयरसँग YouTube भिडियोलाई MP4 मा रूपान्तरण गर्नुहोस्
एटी एन्ड टी सेल फोन योजनाहरु: तपाई को लागि सही छ?
स्क्याम वेबसाइटहरू कसरी पहिचान गर्ने?
आईफोन क्यामेरा कसरी प्रयोग गर्ने
ADE फाइल के हो?
आइपॉड टचको इतिहास
कसरी सन्देशहरू याहूमा खोज्नुहोस्! मेल